ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၁) – တိမ်တိုက်ထွန်း ရေးတဲ့စာ
Posted on June 6, 2019 by Tain Tike Htun
ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၁)
Hoa နဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ပြဿနာဆိုလို့မြူတစ်မှုန်မျှပင်မရှိခဲ့ပါ။ စိတ်ဆိုး၊ စိတ်ကောက်တာလည်းမရှိ၊ ပယောဂတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရှိ။ တခြားချစ်သူရည်း စားတွေထက် အဆပေါင်းများစွာအဆင်ပြေ ဖြောင့်ဖြူးလေသည်။
အဲဒါရဲ့အဓိကအားသာချက်မှာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးနားလည်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါ မည်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အမြဲတမ်းလူချင်းမတွေ့နိုင်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် ဟိုချီမင်းစီးတီးကို နှစ်လတစ်ခါရောက်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ကြိမ်မြောက်ရောက်အပြီးမှာတော့ Hoa နဲ့ကျွန်တော် လေးလအကြာမှ တစ်ခါတွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ကူးချည်သန်းချည်လုပ်ဖို့ဆိုတာက ငွေကြေး အင်အားပေါများနေမှဖြစ်မည်။ အဲဒီအတွက် ကုန်မည့်ပိုက်ဆံကို မင်္ဂလာဆောင်အတွက်စု ဆောင်းထားမည်ပေါ့။
“ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်ခင်ကြတာချည်းပဲ မောင်၊ Hoa တို့ မောင်တို့လို မီဒီယာသမားတွေဆိုသူများထက်ပိုချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် မောင်၊ ဒါဟာ ကျွန်မ ဟိုချီမင်း ကိုစွန့်ခွာတာမဟုတ်ဘူး။ မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။ မောင့်ရင်ခွင်မှာနေရင်းနဲ့ ဟိုချီမင်းရဲ့ မီဒီယာ အလုပ်ကို လုပ်သွားမယ်မောင်”
Hoa ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်တော်လေးစားမိပါသည်။ ကျွန်တော့်အပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုလည်း ပိုပြီးလေးနက်ယုံကြည်သွားလေသည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အခြေ အနေကို နှစ်ဖက်မိဘတွေလည်း သိထားပြီးဖြစ်ကာ လူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒကို ဝင်ရောက်စွက် ဖက်ခြင်းမလုပ်ကြပါချေ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရန်ကုန်မှာပဲနေမယ်။ Hoa က မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေချရင်း ဟိုချီမင်းမှာရှိရင်းစွဲအလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်မည်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေး၊ အစီအစဉ်တွေဟာ သာယာနေခဲ့ပါသည်။ အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုမစခင်အထိပေါ့။
ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်အထိ အဆင်ပြေနေခဲ့သလောက် အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ဆိုးကြီးဟာ ကျွန်တော့်ဘဝထဲကို အငြိုးအတေးကြီးစွာ ဝင်ရောက်လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ဝင်လာသည့်တိုင် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းခံစားရင်း Hoa ဆီကို email ပို့မြဲတိုင်းပို့၊ Facebook မှာ စကားပြောမြဲတိုင်းပြောနေခဲ့ပါသည်။
မင်းမြန်မာလို မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတော့ ကိုယ်ဘယ်လိုပျော်မှန်းမသိဘူး။ ဗီယက်နမ် အမျိုးသားတွေအတွက် ဝတ်စုံဟာ အဆန်းတကြယ်မလိုဘူးလို့ ဟန်နီပြောတာ ကိုယ်သိထားတယ်။
မြန်မာအမျိုးသားတွေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဝတ်စုံက ထူးခြားတယ် ဟန်နီ။
ခေါင်းပေါင်းနဲ့ ပုဆိုးလှလှ၊ တိုက်ပုံလှလှနဲ့ပေါ့။ ပုဆိုးနဲ့တိုက်ပုံကိုတော့ မင်း မြင်ဖူးမှာပါ။ သင်တန်းဆင်းပွဲတုန်းက ကိုယ်ဝတ်တယ်လေ။ မင်းတို့ ဗီယက်နမ်ဝတ်စုံကို လည်း ကိုယ်မြင်ဖူးသားပဲ။ ပန်းပွင့်ကလေးတွေ၊ ပန်းပွင့်ကြီးတွေအပြည့်ပါတဲ့ ဂါဝန်လှလှ လေး။ ပန်းခင်းထဲမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မတ်တပ်ရပ်နေသလိုပေါ့။
မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါ မင်းဝတ်ရမယ့် မြန်မာဝတ်စုံကလည်း ထူးခြားတယ်ဗျ။ ထိုင်မသိမ်းလို့ခေါ်တယ်။ ခမ်းခမ်းနားနားချုပ်လုပ်ထားတာပေါ့။ မင်းမြင်သာအောင် မင်္ဂလာ ဇနီးမောင်နှံဝတ်စုံပုံကို တွဲပို့လိုက်တယ်။ ဗီယက်နမ် မင်္ဂလာဝတ်စုံလည်း ကိုယ်ကြည့်ချင် သေးတယ်။ ပို့ပေးပါဦး။ ကိုယ်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံကို စပွန်ဆာပေးမယ့် ဒီဇိုင်နာရှိတယ် ဟန်နီ။ ဟေး…. စာနယ်ဇင်းအကန့်ကြောင့် မဟုတ်ဘူးနော်။ ethic ဘာညာလုပ်မနေနဲ့ဦး။ ကိုယ်နဲ့ မောင်နှမလိုခင်နေလို့ သူကပေးမှာ။ တခြားပယောဂမပါဘူး။
ဒါနဲ့ Quynh ရောနေကောင်းလား။ ကိုယ်မေးတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ။ ဟိုတစ် ခေါက် (ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်) လာတုန်းက လာမတွေ့တာ စိတ်ဆိုးတယ်လို့။ ဟန်နီ ကျန်းမာ ရေးကိုဂရုစိုက်နော်။ နောက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာ မင်းကိုတင့်တောင့်တင့်တယ်နဲ့ထားနိုင် အောင် ကြိုးစားနေတယ်။
အားလပ်ချိန်ရရင် ရသလို Hoa ဆီကို မေးလ်ပို့ဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေလိုမျိုး အားလပ် ရက်တွေရှိမှ Chatting ထိုင်ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လူချင်းမတွေ့ရတာ ကလွဲရင် အရာရာအဆင်ပြေပြေတွေ့ဆုံနိုင်လေသည်။ အွန်လိုင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး အဆက်အသွယ်မပြတ်။
Hoa ဆီကို အီးမေးလ်ပို့အပြီးမှာပဲ အရှေ့ဧည့်ကောင်တာမှာ ဧည့်သည်ရောက် လာခဲ့လေသည်။ သတင်းရင်းမြစ် ဒါမှမဟုတ် အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက် ယောက်လာနေ ကျမို့ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါ။ သမားရိုးကျဖြစ်စဉ် တစ်ခုလို့သာထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ် တမ်း ခါတိုင်းထက်ထူးဆန်းသောဧည့်သည်မှန်း တွေ့မှသိခဲ့ရလေ၏။
ကျွန်တော်နှင့် အရွယ်မတိမ်းမယိမ်း အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး။
ဒီတစ်ပတ်ထွက်သွားတဲ့ ဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ကျွန်တော့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြသည်။ ခရီး သွားလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းတစ်ပုဒ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲဖြစ်သွား သည်။
သူမက ဂျာနယ်ကိုခပ်ဆဆလေးကိုင်ပြီး ကျွန်တော်အရှေ့ဘတ်ခနဲပစ်ချလိုက်လေ သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း စူးရဲရဲမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်၏။ ပြဿနာ တစ်ခုခုဆို တာ ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။
“အဲ့မှာ … ဖတ်ကြည့်။ ရှင့်သတင်း ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာ”
“ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်သတင်း ကျွန်တော်အလွတ်ရနေတာပဲ။ ဘာပြဿနာရှိလို့ ပါလဲ။ဒီက အစ်မက ဘယ်သူလဲဆိုတာ…”
“အေး… ရှင်ရေးထားတဲ့ သတင်းထဲက (….) ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ မေမြသွယ်ဆိုတာ ကျွန်မပဲ။ ရှင်ရေးတဲ့သတင်းက တက်တက်စင်အောင်မှားနေ တယ်။ အဓိကကတော့ ကျွန်မလုပ်ငန်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ဟိုးအောက်အထိကျဆင်းပြီး ဂျာနယ်ထွက်ပြီးကတည်းက Customerတွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့လာတယ်။ ရှင်ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျွန်မလုပ်ငန်းနစ်နာထိခိုက်အောင် လုပ်ရတာလဲ။ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးမှာလဲ….”
ကိုယ်ရေးတဲ့သတင်းရဲ့အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ရာ ချွတ်ချော်တိမ်းစောင်းမှုရှိသွား ရင် သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ ငြိုငြင်မှုကို ခံစားရတာ သတင်းထောက်တိုင်းရဲ့ အလေ့အထ ဆိုပေမယ့် သူမပုံစံက ကျွန်တော့်အပေါ်တော်တော် မုန်းတီးစက်ဆုပ်နေဟန်။ လုပ်သက်ရင့် လာတာနဲ့အမျှ ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းတွေရော ပုဂ္ဂလိက သတင်းတွေရော တိမ်းစောင်းမှုရဲ့ ရလာဒ်ကို ဖြေရှင်းသည့်အတွေ့အကြုံရှိသင့်သလောက်ကျွန်တော်ဆီမှာရှိခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။
“ဘယ်နေရာမှားတာပါလဲခင်ဗျ။ ကျွန်တော်… ဒီကအစ်မတို့ဆီက အထွေထွေ မန်နေဂျာနဲ့ သေချာအင်တာဗျူးပြီးမှ ရေးတာပဲလေ”
“သူ့ကိုလည်း ကျွန်မ အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီ”
ကျွန်တော့်ကြောင့်လူတစ်ယောက် အလုပ်ပြုတ်သွားမှန်းသိလိုက်ရတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်။
(….) ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်း တိုင် ကြားခံရ၊ ဝန်ဆောင်မှုတိုးမြှင့်ရန် ပြင်ဆင်နေဟု တာဝန်ရှိသူပြော
(…) ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်း ခရီးသွား ပြည်သူ (၄၀) ဦးက သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားခံရခဲ့ပြီးနောက် ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဝန်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (….) ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးဝင်းအောင် ကပြောသည်။
(…) ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဘုရားဖူး၊ အပန်းဖြေ ခရီးစဉ်များကို ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိပြီး ပြီးခဲ့သော မဟာသင်္ကြန်ကာလရုံးပိတ်ရက်အတွင်းက မန္တလေး- ပြင်ဦးလွင်-လားရှိုး-မူဆယ်-ရွှေလီ ခရီးစဉ် သွားရောက်ရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုလျော့ကျခြင်း အတွက် တိုင်ကြားခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနလေးခုခန့်တွင် စာရေးသားတိုင် ကြားပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအတွက် ဝန်ဆောင်ခ လေးသိန်းကိုးသောင်းယူပါတယ်၊ တခြား Travel & Tour ဆိုရင် အဲဒီလောက်တောင် မကျပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီခရီးစဉ်မှာလိုက်ပါတဲ့ သူတွေအားလုံးက ငွေကြေးထက်ဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်မှုကို လိုချင်လို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ ကား ပေါ်မှာထားရမယ့် Guide ကလည်းမပါဘူး။ ယာဉ်အကူကပဲ တတ်သလောက်မှတ်သ လောက် ပြောပြတယ်။ တာဝါ၊ ရေဗူးကအစမထားပေးဘူး။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ကျွေးတဲ့ အစားအသောက်ကလည်း လမ်းဘေးဆိုင်မှာဖြစ် သလိုပဲကျွေးတယ်” ဟု အဆိုပါခရီးစဉ် တွင် လိုက်ပါခဲ့သူ ဦးခင်မောင်က ပြောသည်။ ခရီးစဉ်မတိုင်ခင်က ကြေညာ စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသော ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် တကယ်တမ်း တည်းခိုစားသောက် ရသည့်ဆိုင်များမှာ တူညီမှုမရှိကြောင်း ခရီးသည်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်မြဝင်းကလည်းပြော သည်။ “တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကလည်း ကြေညာစာရွက်မှာ ရေးထားသလို အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်မဟုတ်တဲ့ Guest House ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးကတော့ ရွှေလီဘက်မှာ လိုက်ပို့တဲ့ Guide က ယွမ်ငွေနဲ့ မြန်မာငွေလဲပေးတဲ့အခါ ကာလပေါက်စျေးအတိုင်းမဟုတ် ဘဲ အမြတ်တင်ထားတာတွေ့ရတယ်” ဟုဆိုသည်။ အမြတ် တင်လဲပေးခြင်းကို မော်တော် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်အကူတို့ ပူးပေါင်းကာ အမြတ်ခွဲဝေလဲလှယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ “ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမြတ်ခွဲဝေတဲ့ စကားပြောနေ တာကို ကြားခဲ့ရတာပါ” ဟု ဦးခင်မောင်ကဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ ခရီးစဉ်အပေါ်မကျေနပ်မှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာပင်မ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိဟု ၄င်းတို့ကဆိုသည်။
“အဲဒီလို တိုင်ကြားခံရလို့ ကျွန်တော်တို့ဖက်က စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဝန် ဆောင်မှုကို နောင်အဲလိုမဖြစ်ရအောင် စီစဉ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖက်က ချို့ယွင်းသွား တယ်ဆိုတာလည်း ဝန်ခံပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကလည်း ခေါ်ယူသတိပေးပြီးပါပြီ။ တကယ် တော့ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ အပြောင်းအလဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါ။ (…) ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဆိုတာ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း နာမည်ကောင်းနဲ့ အစဉ်အလာကြီးခဲ့တာပါ” ဟု အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးဝင်းအောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်ရနေသည့် လက်ရှိအ ချိန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုမှာ အဓိကအားသာစေသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ကသုံးသပ်သည်။ (တိုင်ကြားစာတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက် တချို့၊ အရေးယူနိုင်မည့် အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ပြောစကား၊ လုပ်ငန်းရှင် အချို့၏သုံးသပ်ချက် စသည့်အချက်များကိုပါ သတင်းထဲထည့်ထားပါသည်။ )
“ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အထဲမှာ ဘာအမှားပါလို့လဲ။ ဒါအားလုံးအမှန်ပဲလေ။ မဟုတ် ဘူးလား”
တကယ်လည်းမမှားပါ။ စာလုံးတွေလည်း (ကံကောင်းထောက်မစွာပင်) မှားမကျန် ခဲ့။ သူ့လုပ်ငန်းမကောင်းကြောင်းဆိုပေမယ့် Positive ဖက်ကိုရေးထားတာဖြစ်သည်။ ဘာစိတ်တိုစရာရှိလို့ပါလိမ့်။
“မှန်တိုင်းသာရေးလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ MD အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်သွားတယ်ဆို တာ ကျွန်မပဲအသုံးမကျဘူးလို့ အားလုံးကထင်ကုန်မှာပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရစရာ မရှိတော့ဘူး”
“ဒီက အစ်မရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်၊ (….) လုပ်ငန်းထိခိုက်အောင် ရေးထား တာမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာဖတ်ကြည့်။ ဒီလို ပြဿနာမျိုးနောက်မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်နေ တယ်ဆိုတာ ရေးထားတာပါ”
“ရှင်ဘယ်လိုပဲပြောပြော၊ ဒီသတင်းမှားတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ရှင်ဘာလုပ်ပေးမလဲ”
“ကျွန်တော့်သတင်း လုံးဝရာနှုန်းပြည့်မှန်ကန်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ် ပေးနိုင်ပါဘူး။ အမှားပြင်ဆင်ချက်လည်း မထည့်ပေးနိုင်ဘူး”
ကျွန်တော့်ဘက်က သူမတို့ အကျိုးစီးပွားပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း တမင်တကာ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းမဟုတ်။ အဲဒီသတင်းဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ ဂျာနယ် အတွက် ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရသွားတာ။ တခြားသတင်းထောက်တွေလည်း အဲဒီသတင်း ကိုလိုက် နေကြတာမို့ အားလုံးတောက်လျှောက်ပါမှာပင်။
“ကောင်းပြီ၊ ရှင့်ကို ကျွန်မ တရားစွဲမယ်”
“သြော်… ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ဖက်ကလည်း ပြန်ချေပဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ့မယ်”
Previous PostPrevious ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၀)
Next PostNext ရင်နှင့်အမျှ အပိုင်း (၂၂)